PP, PE, ABS, PVC gobvu ndiro yekuwedzera mutsara - China PP, PE, ABS, PVC gobvu ndiro yekuwedzera mutsara mutengesi, fekitori -Jwell
PP gobvu ndiro, inogadzira-inoshamwaridza chigadzirwa uye inowanzo shandiswa mumakemikari indasitiri, indasitiri yezvikafu, indasitiri yekurwisa kukukurwa kwevhu, indasitiri yemidziyo-inoshamwaridzika, nezvimwe.
PP gobvu ndiro yekuwedzera extrusion mutsara we2000mm upamhi tambo ichangoburwa inova mutsetse wepamberi uye wakatsiga uchienzaniswa nevamwe vakwikwidzi.
Pe ndiro yakashandiswa zvakanyanya mumakemikari nemagetsi maindasitiri emagetsi. HDPE ndiro, inozivikanwa seinjiniya mapurasitiki, inoshandiswa mukugadzira
uye michina yemakemikari pamwe nechando hockey mhete masvingo.
ABS gobvu ndiro rinoshandiswa zvakanyanya mumusha mudziyo, zvemagetsi, kurongedza, zvekurapa mudziyo.
Vanachandagwinyira PVC gobvu ndiro iri zvinowanzoshandiswa kemikari maindasitiri, peturu, electroplating, mvura yokuchenesa midziyo, zvakatipoteredza-ushamwari michina, rambi imba uye shambadziro, etc.